गलत कुराको विरोध र सहि कुराको समर्थनमा आवाज संगठित गर्न ट्विटिन्छु-णमप्रशा - MeroReport
गलत कुराको विरोध र सहि कुराको समर्थनमा आवाज संगठित गर्न ट्विटिन्छु-णमप्रशा
केही केही मानिसहरु नाममा के छ भन्दै 'नाम'मात्रको परिचय प्रयाप्त नहुने तर्क राख्छन् भने केहीले आफ्नो नाम अरुभन्दा फरक होस् भन्ने चाहन्छन् । अँझ हिन्दु धर्म मान्नेहरुले त 'चिना'को नामलाइ पनि महत्व दिने गर्छन् । 'णमप्रशा', यो नाम सुन्दा अनौठो र कस्तोकस्तो लागे तापनि 'मेरो चिनाको नाम नै यही हो' भन्छन् बिष्णु अर्थात णमप्रशाले । परिचय माग्दा 'म कसरि चिनिने भन्ने विषय मेरो प्राथमिकतामा पर्दैन। मेरो व्यवहार र प्रस्तुतिबाट साथीहरुले आफुलाई अनुकुल हुनेगरी चिने राम्रो।' भनेर ओठे जवाफ फर्काएका बिष्णु आफ्नै जन्मथलो बुटवललाइ कर्मथलो समेत बनाइ त्यहीँ बस्छन् र पेशाका रुपमा प्रिन्ट तथा डिजाइनको काम गर्छन् । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै बिष्णु अर्थात णमप्रशालाइ उभ्याएका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसंगको कुराकानी :
सोसल मिडियामा ट्वीटे ब्लगर भनि चिनिनुमा रमाइलो मान्छु।
तपाँइको ब्लग http://anamprasha.blogspot.com/ मात्रै कि अरु पनि छन?
ब्लग यहि एउटा मात्र हो।
तपाँइको ब्लग तथा ट्विटर सबैतिर नामका रुपमा 'णमप्रशा' किन? यो नामले चिनिन चाहनुको कारण चाँही के नि?
णमप्रशा मेरो चिनामा लेखिएको नाम रैछ । युनिक लाग्यो अनि धारण गरें। इन्टरनेटमा मेरो पहुँचको सुरुवाती दिनहरु देखि नै सबैतिर यहि नाममा छु। यो नामको अर्को व्यक्ति र एकाउन्ट सायद छैन होला।
तपाँइको ब्लगमा नेपाली भाषामा लेखिएका ब्लगपोष्टहरु धेरै रहेछन् । खासमा यहाँको ब्लगिङको रुची के हो? लेख्ने बिषयबस्तु दुबैका बारेमा भन्नुपर्दा?
धेरै हैन सबै ब्लगपोष्ट नेपाली भाषामै छन। कुनैपनि कुरालाई मैले जसरी हेर्छु/बुझ्छु ठ्याक्कै त्यसैगरी ब्लगमा लेख्छु। आफ्नो बुझाईलाई बलियो प्रस्तुति दिन नेपालीमै सहज लाग्छ। कनिकुथी अंग्रेजीमै पनि भन्न त सकिएला तर त्यसरी अभिव्यक्त कुराहरुबाट म आफै सन्तुष्ट हुन सक्दिन। जीवन-जगत, जिन्दगी, समाज, परिवार, सम्बन्ध, नैतिकता, दायित्व आदि ब्लगिङ्का रुचि हुन्। उल्लेखित रुचिहरु लगायत कुनैपनि विषयमा मेरो धारणा लेखनको विषय हुने गर्छ। मेरो लेखन मेरो दृष्टिकोणको उपज हो। कुनै ठोस र प्रमाणित तथ्यमा आधारित हुन्न । त्यसैले म जे पनि लेख्छु, जुन विषयमा पनि लेख्छु।
मेरो लेखनको लक्षित समूह भनेको सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुनै हुन्।
ब्लग बाहेक ट्विटरमार्फत माइक्रो ब्लगिङमा पनि उत्तिकै लागि पर्नुहुन्छ । ट्विटरमा यहाँलाइ लेख्न मन लाग्ने सवालहरु के हुन खासमा?
ट्वीटरमा मलाई राजनैतिक, सामाजिक समसामयिक विषयवस्तुहरुमा चर्चा गर्न मनपर्छ। ट्विटे एकताको पक्षपाती हुँ तर त्यो एकता एकले अर्कोलाई चाहिने-नचाहिने कुरामा सपोर्ट गर्न हैन। गलत कुराको विरोध र सहि कुराको समर्थन र प्रोत्साहनमा ट्वीटे आवाज संगठित होस् भन्ने ध्येयले ट्वीटिन्छु।
२००९ मै हो ब्लग लेख्छु भनि सुरिएको तर सुरु गर्न सकिन। पछिल्लो समयमा ट्वीटरमा बढेको मेरो सक्रियता संगै साथीहरुको ब्लग पढ्ने मौका मिल्यो। केहि साथीहरुले मलाई उक्साए लेख्न। मलाई लेख्न उक्साउने ज्योति जी हुनुहुन्छ। प्रेरणा संजीव सरको ब्लगबाट पाएँ। टाइमलाइनका साथीहरुले मेरो ब्लग पढेर दिएका प्रतिक्रियाहरुको नतिजा हो मेरो लेखन।
कुनैपनि विषयमा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्नका लागि ब्लग लेख्छु। लेखनको मेरो व्यक्तिगत कारणलाई मर्यादित बनाउन सकेंभने यसबाट हुने सकारात्मक प्रभावको क्षेत्र फराकिलो हुँदै जाने विश्वासले पनि लेख्छु।
मेरो लागि ब्लगमा समय निकाल्न गाह्रो छैन। किनकि मेरो लेखन साहित्यिक सिर्जना वा त्यस्तै केहि रचनात्मक विषयमा हुँदैनन्, आफ्नो धारणा र बुझाई लेख्छु मैले त्यसो हुँदा मलाई लेख्नलाई धेरै सोच्न पर्दैन। जाँगर भए पुग्छ।
ब्लगिङ्ग बाहेक मेरो रुचिहरु धेरै छन्। लेखि साध्य र पढी साध्य छैन। छरितो जवाफका लागि – ट्वीटिङ् ।
सोसल मिडियाको प्रयोग त्यसरी नै हुँदैछ जसरी यसका निर्माताहरुले डिजाइन गरेका थिए। मेरो मान्यता यसलाई अझै बृहत रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो। उपभोग मात्र हैन उपयोग पनि गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क हो।
ब्लगिङ्गको प्रयोग दुरुपयोगका रुपमा भएको जानकारी छैन। सदुपयोग नै हो। तर ब्लगरहरु बिचमा कम्युनिकेसन ग्याप महसुस गर्छु। एक अर्काको ब्लग पढ्ने र त्यसका आधारमा सामुहिक छलफल र बहसको परिपाटी नबसेको हो कि मैले थाहा नपाएको हो कुन्नि?
अरुको ब्लगहरु पनि पढ्छु। संजीव सर, जुजु सर, बरुण सर, बिकास सर, शब्दचित्र, युरेका, लेन्दाइ, अनन्त सर, बडालजी, निशांकजी अरु धेरै छन्। ट्वीटर टाइमलाइनमा शेयर हुने प्राय सबै पढ्छु।
मैले विशेषगरी लेख रचनाहरु बढी पढ्छु तर साहित्यिक सिर्जनाले पनि ध्यानाकृष्ट गरिनै रहन्छन।
छैन जरुरी आचारसंहिता। प्राथमिकता ब्लगरलाई सुचिकृत र संगठित गर्ने हुनुपर्छ र यो भैरहेकै छ तपाइँहरुबाट। आचारसंहिताको कुरो मलाई चित्त बुझ्दैन र कुरै गर्ने हो भने मेरो बुझाईमा ब्लगमा आचारसंहिता दुई किसिमका हुन्छन। एउटा आचारसंहिता पाठकको दृष्टिकोणमा। अर्को लेखकको बुझाईमा। मैले पढ्ने लेखकहरु जिम्मेवार छन्।
अरुका ब्लगहरु हेर्दा कत्तिको मर्यादित भएको पाउनु भएको छ?
जिम्मेवारीले लेख्ने हो, उत्सुकता र जिज्ञासाले पढ्ने हो। मैले पढेका ब्लगहरु मेरो दृष्टिकोणमा सहि छन्।
ब्लगसंग जोडिएका त्यस्ता रमाइला प्रसंग केहि पनि छैनन्।
म ट्वीटर र ब्लगमा सक्रिय छु। फेसबुकमा पनि एकाउन्ट खोलेको हो फोकटमा पाएर। फेसबुक प्रयोग त्यति गरेको छैन। मेरो स्वभाव अनुसार मलाई ट्वीटर र ब्लग सहज लाग्छ। तर सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा फेसबुकको लोकप्रियता बलियो सम्भावना हो। त्यो अलग चिन्ताको विषय हो कि फेसबुकलाई फेसबुक कै विकृति विसंगतिसंग पहिला लड्नुपर्ने देखिन्छ।
मैले पढेका केहि ब्लगहरु सामाजिक हितमा अत्यन्तै सान्दर्भिक पाएको छु। जस्तै संजीव सर र जुजु सरको ब्लगमा लेखिएका विषय र विश्लेषणले धेरै महत्व राख्दछन।
मोफसलमा ब्लगर कम हुनुमा त्यस्तो रहस्यमय कारण केहि छैन। यस विषयमा भन्नुपर्ने र सुन्नुपर्ने खासै के हुन सक्ला र? तर जवाफ लेख्नैपर्दा, बिस्तारै ब्यापक हुँदैछ ब्लगिङ्। प्रचारप्रसारको व्यापकता संगै मोफसल र काठमाण्डौको ब्लगिङ्गको दुरी घट्छ र घट्दै पनि छ।
ब्लगिङ्ग नागरिक पत्रकारिता हो होइन, नागरिक पत्रकारिताका मूल्य मान्यता के के हुन् ठ्याक्कै थाहा भएन तर ब्लगिङ कुनै पनि पत्रकारिता भन्दा कम जिम्मेवार र असरदायी छैन। सबै नागरिकमा जिम्मेवारी हुनुपर्छ। संगठित हुने र हुन चाहने जुनसुकै क्षेत्र, सामान्य नागरिक भन्दा बढी जिम्मेवार हुनैपर्छ। यसो भएमा हामी ब्लगर पनि नागरिक पत्रकार हौँ भन्नुमा आपत्ति केहि छैन।
धेरै धन्यवाद मेरोरिपोर्टलाई ! अकल्पनीय सम्मान भित्रको जिम्मेवारी बोधको पोको सधैं सम्झिरहनेछु। मेरोरिपोर्टको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। ब्लगिङ र सामाजिक संजाल प्रयोगलाई थप मर्यादित र संगठित बनाउने अभियानमा हाम्रो अघोषित सहकार्य जारि रहँदै सक्रियता तर्फ उन्मुख होस्। धेरै धन्यवाद ! आभार !!
Comment by Pagal Basti on August 3, 2013 at 12:54pm